Asafo mu Mpanyimfo—‘Mfɛfo Adwumayɛfo a Wɔboa Ma Yɛn Ani Gye’ | Adesua Nsɛm
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Yɛyɛ mfɛfo adwumayɛfo a yɛboa ma mo ani gye.”—2 KOR. 1:24.
HWEHWƐ NSƐMMISA YI HO MMUAE:
Dɛn na Paulo yɛe de kyerɛe sɛ ‘ɔnyɛ otumfoɔ wɔ ne nuanom gyidi so’ na mmom ‘ɔyɛ yɔnko dwumayɛni a ɔboa ma wɔn ani gye’?
Dɛn na mpanyimfo yɛ de boa wɔn nuanom mmarima ne mmea ma wɔn ani gye?
Dɛn na yɛn nyinaa betumi ayɛ ma asafo no mu ayɛ dɛ?
1. Asɛm bɛn na Paulo te faa Kristofo a wɔwɔ Korinto no ho a ɛmaa n’ani gyei?
AFE 55 Y.B. mu no, na ɔsomafo Paulo wɔ Troa, na ɔtee asɛm bi a anyɛ no dɛ. Na akameakame ne akyinnyegye rekɔ so wɔ anuanom mu wɔ Korinto. Ná Korintofo no da Paulo koma so sɛ ne mma, enti ɔkyerɛw krataa kotuu wɔn fo. (1 Kor. 1:11; 4:15) Afei nso ɔsomaa ne yɔnko dwumayɛni Tito sɛ ɔnkɔsra wɔn na ɔmmɛka nea obehu nkyerɛ no wɔ Troa. Paulo hwɛɛ Tito anim kyɛe wɔ Troa. Na ɔpɛ sɛ ɔte anuanom a wɔwɔ Korinto no nka. Enti ɛhaw no sɛ Tito akyɛ saa. Afei dɛn na Paulo bɛyɛ? Ɔkɔɔ Makedonia, na ɛhɔ na ohyiaa Tito. Tito ka kyerɛɛ Paulo sɛ anuanom tiee n’afotu no, na wɔn ani agyina no paa. Bere a Paulo tee saa no, ‘n’ani gyei bebree.’—2 Kor. 2:12, 13; 7:5-9.
2. (a) Dɛn na Paulo ka faa Korintofo no gyidi ne wɔn anigye ho? (b) Nsɛmmisa bɛn na yebesusuw ho?
2 Eyi akyi no, ankyɛ na Paulo kyerɛw krataa a ɛto so abien kɔmaa Korintofo no. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yɛnyɛ mo gyidi so atumfoɔ, na mmom yɛyɛ mfɛfo adwumayɛfo a yɛboa ma mo ani gye, efisɛ mo gyidi na ama mugyina hɔ.” (2 Kor. 1:24) Dɛn na na Paulo repɛ akyerɛ? Dɛn na asafo mu mpanyimfo a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi asua afi saa asɛm no mu?
YƐN GYIDI NE YƐN ANIGYE
3. (a) Bere a Paulo kae sɛ “mo gyidi na ama mugyina hɔ” no, dɛn na na ɔrepɛ akyerɛ? (b) Dɛn na mpanyimfo a wɔwɔ hɔ nnɛ yɛ de suasua Paulo?
3 Paulo kyerɛɛ nneɛma abien a ɛho hia wɔ yɛn som mu. Ɛno ne gyidi ne anigye. Nea edi kan no, yɛnhwɛ nea Paulo kyerɛw faa gyidi ho. Ɔkae sɛ: “Yɛnyɛ mo gyidi so atumfoɔ, . . . efisɛ mo gyidi na ama mugyina hɔ.” Paulo asɛm yi kyerɛ sɛ ogye toom sɛ ɛnyɛ ɔno anaa onipa foforo bi nti na anuanom a wɔwɔ Korinto no gyina hɔ pintinn resom Onyankopɔn, mmom wɔn ankasa gyidi nti. Ná Paulo wɔ ahotoso sɛ anuanom dɔ Onyankopɔn na wɔpɛ sɛ wɔyɛ nea ɛteɛ. Enti ohui sɛ enhia sɛ ɔhyɛ wɔn so te sɛ nea wonni gyidi. Nokwasɛm ne sɛ amma ne tirim mpo sɛ ɔbɛyɛ saa. (2 Kor. 2:3) Mpanyimfo a wɔwɔ hɔ nnɛ suasua Paulo. Wɔwɔ ahotoso sɛ wɔn nuanom wɔ gyidi wɔ Onyankopɔn mu na adwempa na wɔde som no. (2 Tes. 3:4) Mpanyimfo nhyehyɛ mmara katee mma asafo no. Mmom wɔma anuanom hu Bible mu afotu ne akwankyerɛ a Yehowa ahyehyɛde no de ma. Enti mpanyimfo a wɔwɔ hɔ nnɛ nyɛ atumfoɔ wɔ wɔn nuanom gyidi so.—1 Pet. 5:2, 3.
4. (a) Bere a Paulo kae sɛ: “Yɛyɛ mfɛfo adwumayɛfo a yɛboa ma mo ani gye” no, dɛn na na ɔrepɛ akyerɛ? (b) Ɔkwan bɛn so na mpanyimfo a wɔwɔ hɔ nnɛ suasua Paulo?
4 Paulo san kae sɛ: “Yɛyɛ mfɛfo adwumayɛfo a yɛboa ma mo ani gye.” Ná henanom ne “mfɛfo adwumayɛfo” no? Ɛyɛ wɔn a wɔne Paulo boom yɛɛ adwuma de boaa Korintofo no. Yɛyɛ dɛn hu saa? Paulo bɔɔ mfɛfo adwumayɛfo no abien din wɔ krataa a ɔkyerɛw Korintofo no mu. Ɔkyerɛwee sɛ ‘ɔne Silwano ne Timoteo kaa Yesu ho asɛm wɔ wɔn mu.’ (2 Kor. 1:19) Afei nso bere biara a Paulo bɛka “mfɛfo adwumayɛfo” ho asɛm wɔ ne nkrataa mu no, na ɔrekyerɛ wɔn a wɔne no boom yɛɛ asɛnka adwuma no. Wɔn mu bi ne Apolo, Akwila, Priska, Timoteo ne Tito. (Rom. 16:3, 21; 1 Kor. 3:6-9; 2 Kor. 8:23) Enti bere a Paulo kae sɛ: “Yɛyɛ mfɛfo adwumayɛfo a yɛboa ma mo ani gye” no, na ɔreka akyerɛ Korintofo no sɛ ɔne ne mfɛfo adwumayɛfo no pɛ sɛ wɔyɛ nea wobetumi biara boa asafo no mufo nyinaa ma wɔde anigye som Onyankopɔn. Saa pɛpɛɛpɛ na Kristofo asafo mu mpanyimfo a wɔwɔ hɔ nnɛ pɛ sɛ wɔyɛ. Wɔpɛ sɛ wɔyɛ nea wobetumi biara boa wɔn nuanom ma wɔde ‘anigye som Yehowa.’—Dw. 100:2; Filip. 1:25.
5. Asɛm bɛn na wobisaa anuanom mmarima ne mmea bi? Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa ma ɛtena yɛn adwenem?
5 Nnansa yi wobisaa anuanom mmarima ne mmea bi a wɔwɔ aman horow so sɛ: “Dɛn na panyin bi yɛe anaa ɔkae a ɛmaa w’ani gyei?” Yebesusuw mmuae a wɔmae ho. Bere a yɛreyɛ saa no, hwɛ sɛ wobɛkae nea ɔpanyin bi yɛe anaa ɔkae a ɛmaa w’ani gyei. Afei nso momma yɛn nyinaa nhwɛ nea yebetumi ayɛ ma asafo no mu ayɛ dɛ. *
“MUNKYIA YƐN DƆFO PERSI”
6, 7. (a) Ɔkwan biako bɛn na mpanyimfo bɛfa so asuasua Yesu, Paulo, ne Onyankopɔn asomfo foforo? (b) Adɛn nti na sɛ yɛde anuanom din frɛ wɔn a, wɔn ani gye paa?
6 Anuanom pii kae sɛ, sɛ wohu sɛ mpanyimfo no dwen wɔn ho a, wɔn ani gye paa. Ɔkwan biako a mpanyimfo bɛfa so ayɛ saa ne sɛ wobesuasua Dawid, Elihu, ne Yesu. (Monkenkan 2 Samuel 9:6; Hiob 33:1; Luka 19:5.) Na wɔyɛ Yehowa asomfo a wodwen afoforo ho. Ɔkwan biako a wɔde kyerɛɛ saa ne sɛ na wɔde nkurɔfo din frɛ wɔn. Paulo nso hui sɛ ehia sɛ ɔkae ne nuanom Kristofo din na ɔde frɛ wɔn. Yɛmfa krataa bi a ɔkyerɛwee nyɛ nhwɛso. Bere a ɔrebewie no, ɔbobɔɔ anuanom mmarima ne mmea bɛboro 25 din kyiaa wɔn. Wɔn mu biako ne Kristoni bea Persi. Paulo kae sɛ: “Munkyia yɛn dɔfo Persi.”—Rom. 16:3-15.
7 Ɛyɛ den ma mpanyimfo bi sɛ wɔbɛkae anuanom din. Nanso sɛ ɔpanyin bi bɔ mmɔden sɛ obehu anuanom din a, wohu sɛ ɔpanyin no dwen wɔn ho. (Ex. 33:17) Sɛ ɔpanyin bi rehwɛ Ɔwɛn-Aban Adesua so anaa adesua foforo biara so na ɔbɔ anuanom din frɛ wɔn a, wɔn ani gye paa.—Fa toto Yohane 10:3 ho.
“ƆYƐƐ ADWUMADEN PII WƆ AWURADE MU”
8. Ade titiriw bɛn na Paulo yɛe de suasuaa Yehowa ne Yesu?
8 Ade foforo a Paulo yɛe de kyerɛe sɛ odwen afoforo ho ne sɛ ɔkamfoo wɔn. Sɛ mpanyimfo kamfo wɔn nuanom Kristofo a, ɛma wɔn ani gye. Enti bere a Paulo kyerɛw Korintofo no a ɔkae sɛ ɔpɛ sɛ wɔn ani gye no, ɔkae wɔ krataa no mu sɛ: “Mede mo hoahoa me ho pii.” (2 Kor. 7:4) Yebetumi aka sɛ asɛm a Paulo kae yi kaa anuanom a wɔwɔ Korinto no koma paa. Paulo kamfoo anuanom a wɔwɔ asafo foforo mu nso. (Rom. 1:8; Filip. 1:3-5; 1 Tes. 1:8) Bere a Paulo rekyerɛw Romafo asafo no, ɔbɔɔ Persi din wɔ ne krataa no mu na ɔka kaa ho sɛ: “Ɔyɛɛ adwumaden pii wɔ Awurade mu.” (Rom. 16:12) Yebetumi aka sɛ bere a Persi tee asɛm no n’ani gyei paa! Bere a Paulo kamfoo afoforo no, na ɔresuasua Yehowa ne Yesu.—Monkenkan Marko 1:9-11; Yohane 1:47; Adi. 2:2, 13, 19.
9. Dɛn nti na sɛ yɛkamfo afoforo wɔ asafo no mu a, obiara ani gye?
9 Ɛnnɛ nso mpanyimfo nim sɛ ehia sɛ wɔkamfo wɔn nuanom. (Mmeb. 3:27; 15:23) Sɛ ɔpanyin bi yɛ saa a, ɛte sɛ nea ɔreka akyerɛ ne nuanom sɛ ohu mmɔden wɔrebɔ wɔ asafo no mu no na odwen wɔn ho. Anuanom mmarima ne mmea a wɔwɔ asafo no mu pɛ sɛ mpanyimfo no bue wɔn ano ka nkuranhyɛsɛm kyerɛ wɔn. Onuawa bi a wadi boro mfe 50 kae sɛ: “Ɛyɛ den sɛ obi bɛkamfo me wɔ adwumam. Obiara asɛm mfa ne yɔnko ho; nea obiara pɛ ne sɛ obetwa ne yɔnko nantin. Enti sɛ meyɛ biribi ma asafo no na ɔpanyin bi kamfo me a, ɛma me ho bae me! Ɛma mihu sɛ me soro Agya no dɔ me.” Onuabarima bi a ɔno nkutoo rehwɛ ne mma baanu nso kae sɛ ɔpanyin bi kamfoo no nnansa yi ma n’ani gyei paa. Ɔkae sɛ: “Ɔpanyin no asɛm no ma minyaa ahoɔden a mede bɛyɛ pii wɔ Yehowa som mu.” Ɛda adi pefee sɛ, sɛ ɔpanyin kamfo ne nuanom a, ɛhyɛ wɔn mpamden ma wɔde anigye ne ahokeka nantew nkwa kwan no so a ‘wɔmmrɛ.’—Yes. 40:31.
‘MONHWƐ ONYANKOPƆN ASAFO NO SO’
10, 11. (a) Dɛn na mpanyimfo betumi ayɛ de asuasua Nehemia? (b) Sɛ ɔpanyin bi pɛ sɛ ɔkɔsra ne nuanom a, dɛn na ɛbɛboa no ma ɔde honhom mu akyɛde ama wɔn?
10 Ade titiriw bɛn bio na mpanyimfo betumi ayɛ ma wɔn nuanom ahu sɛ wodwen wɔn ho na ama asafo no mu ayɛ dɛ? Sɛ wohu sɛ obi hia nkuranhyɛ a, wɔntenatena ho koraa; wotu anammɔn ntɛm kɔboa no. (Monkenkan Asomafo Nnwuma 20:28.) Sɛ mpanyimfo yɛ saa a, na wɔresuasua ahwɛfo a wɔtenaa ase tete no. Momma yɛmfa Nehemia nyɛ nhwɛso. Bere a ohui sɛ ne mfɛfo Yudafo bi ayɛ mmerɛw no, Bible ka sɛ ‘ntɛm ara ɔsɔre’ kɔhyɛɛ wɔn den. (Neh. 4:14) Ɛnnɛ nso mpanyimfo pɛ sɛ wɔyɛ saa ara. Wɔkɔ wɔn nuanom nkyɛn kɔhyɛ wɔn den ma wɔn ase tim wɔ gyidi no mu. Mpanyimfo bɔ mmɔden sɛ wɔbɛkɔ wɔn nuanom mmarima ne mmea fie akɔma wɔn “honhom mu akyɛde,” kyerɛ sɛ, wɔbɛboa wɔn ma wɔn gyidi ayɛ den. (Rom. 1:11) Dɛn na ɛbɛboa mpanyimfo ma wɔayɛ saa?
11 Sɛ ɔpanyin bi pɛ sɛ ɔkɔsra onua bi hyɛ no den a, ehia sɛ ɔtena ase susuw onii no ho ansa na wakɔ. Obetumi abisa ne ho sɛ: ‘Nsɛnnennen bɛn na onua no rehyia? Dɛn na metumi aka de ahyɛ no den? Kyerɛwsɛm bɛn na metumi de aboa no? Bible mu nnipa bɛn na metumi de n’asɛm ahyɛ no nkuran? Sɛ ɔpanyin gye bere susuw nsɛm a ɛte saa ho ansa na wakɔ a, obenya asɛm bi a ɛhyɛ nkuran aka akyerɛ no; ɛrenyɛ nkɔmmɔ biara kɛkɛ. Sɛ ɔpanyin kɔsra anuanom a, ɔma wɔn kwan ma wɔkasa na ɔyɛ aso tie wɔn. (Yak. 1:19) Onuawa bi kae sɛ: “Sɛ worekasa na ɔpanyin yɛ aso tie wo a, wo koma tɔ wo yam.”—Luka 8:18.
Sɛ ɔpanyin siesie ne ho ansa na wakɔsra anuanom a, onya “honhom mu akyɛde” ma wɔn
12. Asafo no mufo bɛn na wohia nkuranhyɛ, na dɛn ntia?
12 Henanom na ehia sɛ mpanyimfo no srasra wɔn hyɛ wɔn nkuran? Paulo tuu ne mfɛfo mpanyimfo fo sɛ ‘wɔmma wɔn ani mmra nguankuw no nyinaa so.’ Enti asafo no mufo nyinaa hia nkuranhyɛ; adawurubɔfo ne akwampaefo a wɔde mfe pii asom mpo hia nkuranhyɛ. Dɛn nti na ehia sɛ mpanyimfo no bɔ saafo no kyidɔm? Ɛwom sɛ wɔn gyidi yɛ den de, nanso wiase bɔne yi mu nsɛnnennen betumi ahyɛ wɔn so. Asɛm a esii wɔ Ɔhene Dawid asetenam bɛboa yɛn ma yɛahu nea enti a ɛtɔ da bi a, Yehowa asomfo a wɔyɛ den mpo hia nkuranhyɛ fi wɔn nuanom hɔ.
“ABISAI BƐBOAA NO”
13. (a) Tebea bɛn na na Dawid wom a Yisbi-Beno pɛe sɛ okum no? (b) Ɛyɛɛ dɛn na Abisai tumi gyee Dawid?
13 Bere a wɔsraa aberante Dawid sɛ ɔhene no, ankyɛ na ɔne Goliat de kɔbɔɔ ani. Na Goliat fi Refaimfo a wɔyɛ abran no mu, nanso Dawid nyaa akokoduru kum no. (1 Sam. 17:4, 48-51; 1 Be. 20:5, 8) Mfe bi akyi no, bere a Israelfo ne Filistifo reko no, Dawid kohyiaa ɔbran foforo. Na ne din de Yisbi-Beno. Na ɔno nso yɛ Refaim aseni. (2 Sam. 21:16) Nanso saa bere no de, ɛkaa dɛ anka ɔbran no kum Dawid. Adɛn ntia? Ɛnyɛ sɛ ehu kaa Dawid, na mmom Bible ka sɛ na ‘wabrɛ.’ Bere a Yisbi-Beno hui sɛ Dawid ayɛ mmerɛw no, ɔyɛe sɛ ‘ɔrebɔ Dawid akum no,’ nanso “ntɛm ara na Seruia ba Abisai bɛboaa [Dawid], na ɔbɔɔ Filistini no kum no.” (2 Sam. 21:15-17) Sɛ ɛnyɛ Abisai a, ebia anka Dawid awiei ara ne no! Abisai de n’ani too fam hui sɛ Dawid nkwa da asiane mu, na ɔyɛɛ ntɛm kɔboaa no. Akyinnye biara nni ho sɛ Dawid ani sɔɔ nea Abisai yɛe no. Dɛn na yebetumi asua afi asɛm yi mu?
14. (a) Dɛn na ɛboa yɛn ma yedi nsɛnnennen a ɛte sɛ ɔbran “Goliat” so? (b) Dɛn na mpanyimfo betumi ayɛ de ahyɛ wɔn nuanom den ma wɔde anigye asom? Ma nhwɛso.
14 Yehowa nkurɔfo a wɔwɔ wiase nyinaa de ahokeka reyɛ asɛnka adwuma no, nanso Satan ne n’apamfo de nneɛma tõatõa wɔn. Yɛn mu bi hyia nsɛnnennen a ɛte sɛ ɔbran “Goliat,” nanso sɛ yɛde yɛn ho to Yehowa so a, yebetumi adi so sɛnea Dawid tumi dii Goliat so no. Nanso ɛtɔ da bi a wiase mu nhyɛso ne emu haw ma yɛbrɛ anaa yɛbotow. Ɛba saa na yehyia nsɛnnennen a anka yebetumi adi so mpo a, ɛnyɛ den sɛ ebebunkam yɛn so. Yɛkɔ tebea a ɛte saa mu a, ɔpanyin bi betumi aboa yɛn ma yɛasan agyina yɛn nan so de anigye asom. Yɛn mu pii anya mmoa a ɛte saa. Onuawa kwampaefo bi a wadi boro mfe 60 kae sɛ: “Bere bi na mente apɔw, na mekɔ asɛnka kakra a na mabrɛ. Ɔpanyin bi hui sɛ m’ahokeka akɔ fam na ɔbaa me nkyɛn. Ɔde Bible hyɛɛ me nkuran. Mede nyansahyɛ a ɔde maa me no yɛɛ adwuma, na ɛboaa me paa.” Onuawa no ka kaa ho sɛ: “Ɛyɛ me dɛ sɛ ɔpanyin no de n’ani too fam hui sɛ mayɛ mmerɛw na ɔboaa me!” Nokwasɛm ni, yɛwɔ mpanyimfo a wodwen yɛn ho na wɔayɛ krado sɛ wɔbɛboa yɛn sɛnea Abisai yɛɛ ntɛm boaa Dawid no. Eyi ma yɛn koma tɔ yɛn yam!
‘WOHUU ƆDƆ KƐSE A PAULO WƆ MA WƆN’
15, 16. (a) Dɛn nti na na anuanom pɛ Paulo asɛm saa? (b) Dɛn nti na yɛn nso yɛpɛ asafo mu mpanyimfo asɛm?
15 Mpanyimfo adwuma nna fam. Onyankopɔn nguan ho dadwen nti, ɛtɔ da bi a mpanyimfo kɔ kɛtɛ so a wɔnna. Da bi wɔ hɔ a wɔsɔre anadwo dasum bɔ mpae ma wɔn nuanom anaa wɔkɔboa wɔn. (2 Kor. 11:27, 28) Eyi nyinaa mu no, mpanyimfo no de anigye yɛ wɔn adwuma yiye sɛnea Paulo yɛe no. Ɔkyerɛw Korintofo no sɛ: “Mifi anigye kɛse mu de me ho nneɛma bɛma na mede me ho ama mo kra korakora.” (2 Kor. 12:15) Na Paulo dɔ ne nuanom, enti ɔde ne ho nyinaa maa wɔn sɛnea wobetumi agyina pintinn. (Monkenkan 2 Korintofo 2:4; Filip. 2:17; 1 Tes. 2:8) Enti sɛ na anuanom pɛ Paulo asɛm a, ɛnyɛ nwonwa!—Aso. 20:31-38.
16 Onyankopɔn asomfo a yɛwɔ hɔ nnɛ nso pɛ asafo mu mpanyimfo asɛm efisɛ wodwen yɛn ho. Yɛbɔ mpae da Yehowa ase daa sɛ ɔde mmarima a wɔte saa ama yɛn. Ɛyɛ yɛn anigye sɛ yɛwɔ mpanyimfo a wɔn ani kũ yɛn ho na wɔsrasra yɛn hyɛ yɛn den. Bio nso, sɛ yɛhwɛ sɛnea wɔayɛ krado sɛ wɔbɛboa yɛn wɔ yɛn ahohia mu a, ɛka yɛn koma paa. Nokwasɛm ni, Kristofo asafo mu mpanyimfo yɛ ‘mfɛfo adwumayɛfo a wɔboa ma yɛn ani gye.’
^ nky. 5 Wɔsan bisaa anuanom yi sɛ, “Su bɛn na wuhu wɔ ɔpanyin bi ho a, w’ani gye ho paa?” Wɔn mu dodow no ara kae sɛ “ɔpanyin a n’anim tew.” Yebesusuw saa su yi ho wɔ Ɔwɛn-Aban bi a ɛbɛba mu, na ɛbɛkyerɛ nea enti a ehia sɛ mpanyimfo nya saa su no.